स्वास्थ्य-सौन्दर्य – www.sahayatree.com
Home / स्वास्थ्य-सौन्दर्य
5 days ago	टप स्टोरी, पत्रपत्रिकाबाट, समाचार, स्वास्थ्य-सौन्दर्य 0
काठमाडौँ , २६ असार । गर्मी मौसममा खानपानमा अलिकता लापरवाहीले पनि बिरामी पर्ने सम्भावना हुन्छ । जाडो मौसमको तुलनामा गर्मीमा पाचन शक्ति कमजोर हुन्छ । यस्तो बेला बढी तारेको या मसालायुक्त खाना धेरै खानुहुँदैंन । फुड प्वाइजनको समस्या हुने पनि यही मौसममा हो । त्यसैले यो मौसममा हल्का या सजिलै …
गर्मीमा सतर्कता (सम्पादकीय)
2 weeks ago	समाचार, स्वास्थ्य-सौन्दर्य 0
काँठमाडौं , १७ असार , अहिले देशभर गर्मी बढेको छ । मनसुन सुरु हुन ढिलो भएपछि गर्मी झन् बढेको हो । सहर बजारमा गर्मीका बेला थप समस्या हुन्छ नै । गाउँबेसीमा पनि पानीको मुहान सुक्ने र प्रदूषित पानीले रोग सङ्क्रमण बढी हुन्छ । एकातिर चर्को गर्मी, अर्कोतिर धूलो धूँवा र …
स्वास्थ्य प्रणालीको मार्गचित्र (सम्पादकीय)
2 weeks ago	समाचार, समाज, स्वास्थ्य-सौन्दर्य 0
काँठमाडौं १८ असार नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति लागू भएको छ । विद्यमान संविधान अनुकूल स्वास्थ्य संरचना र प्रणाली परिमार्जन गर्न यो राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ जेठ १० गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो । स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय बनाउन जनसङ्ख्या, भूगोल र सङ्घीय संरचनाअनुसार दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिको विकास तथा …
आँखाको वरिपरि देखिने कालो धब्बा यसरी हटानुहोस​
Jun 4, 2019	टप स्टोरी, समाचार, स्वास्थ्य-सौन्दर्य 0
१. गुलाव जल : कटनको कपडाको डल्लो बनाई त्यसलाई गुलाव जलमा डुवाउनुहोस र १० मिटेनसम्म त्यसलाई आँखामा राख्नुहोस् । २. काँक्रो : काँक्रोमा छालालाई चमक दिने विशेषता हुन्छ । ताजा काँक्रोलाई गोलो गरी काटेर आधा घण्टासम्म फ्रिजमा राख्नुस् । त्यसपछि त्यसलाई आँधा वरिपरि करीब १०-१५ मिनेटसम्म राख्नुस र सफा पानीले …
तिलकोठी तथा चाँया हटाउने फेसप्याक
May 12, 2019	लोकप्रिय, स्वास्थ्य-सौन्दर्य 0
तिलकोठीका लागि फेसप्याक बनाउँदा हरियो धनियाँको रसमा दुईदेखि चार थोपा कागतीको रस तथा तीनदेखि पाँच थोपा बियर मिसाएर अनुहारमा लगाउँदा तिलकोठी कम हुन्छ । बेसार एवं दही मिसाएर अनुहारमा लगाउने । लगाएको २० मिनेटपछि नुहाउँदा अनुहारको तीलकोठी सफा हुन्छ । एक कप दूधमा दुई चम्चा ह्विस्की मिसाएर आधा कप हुने गरी पकाउने अनि …
Jan 21, 2019	लोकप्रिय, समाचार, स्वास्थ्य-सौन्दर्य 0
काठमाडौँ, ७ माघ​। कतिपय मानिसले जाडो र गर्मीमा एउटै प्रकृतिको शृंगार सामग्री प्रयोग गर्छन् तर यसो गर्दा छालामा प्रभावकारी प्रतिक्रिया नदेखिन सक्छ । जाडोमा छाला सुक्खा हुन्छ भने गर्मीमा चिल्लो । जाडोमा मोइस्चराइजरको प्रयोग बढी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पनि हामीले मौसमअनुसार मेकअप प्रोडक्ट प्रयोग गर्नुपर्छ । जाडो मौसमको प्रारम्भसँगै …
हड्डीको समस्या के हो ?, यस्तो छ उपचार
Sep 26, 2018	Breaking News, टप स्टोरी, लोकप्रिय, समाज, स्वास्थ्य-सौन्दर्य 0
काठमाडौं, १० असोज । हड्डी मानिसको शरीरको पिल्लर हो । जसले शरीरलाई मजबुत बनाएको हुन्छ । हड्डीले मानव शरीरभित्रको महत्वपूर्ण अंगलाई बाहिरी चोटबाट बचाउँछ । जन्मेको १८ देखी २० वर्षसम्म हाम्रो शरीरमा ९० प्रतिशत हड्डीको विकास भईसकेको हुन्छ । त्यसपछि यसको विकास हुन क्रम स्थिर रहन्छ । उमेर बढ्दै जादाँ …
जिब्रोमा कालो दाग आयो ? क्यान्सर हुन पनि सक्छ
Sep 25, 2018	टप स्टोरी, समाज, स्वास्थ्य-सौन्दर्य 0
काठमाडौं, ९ असोज । मानिसको जिब्रोमा कालो दाग देखा पर्नुमा साधारणदेखी जटिलसम्मका कारण हुन सक्छन् । हाँमीकाहा गम्भिर समस्या नभई अस्पताल आउने चलन कमै छ । जिब्रोमा पनि केही समस्या हुने बित्तकै मानिस कमै जिज्ञासु हुन्छन् । धेरैले यो आउँछ, जान्छ भनेर परामर्श लिन आवश्यक ठान्दैनन् । जिब्रोमा कालो दाग …
Sep 20, 2018	मनोरञ्जन, संघर्ष र सफलता, समाचार, समाज, सहयात्री विशेष, स्वास्थ्य-सौन्दर्य 0
काठमाडौं, ४ असोज । खुसी , जिन्दगीको लक्ष्य हो । जसले जीवनको जस्तोसुकै, जुनकुनै मोडहरुमा पनि आफुलाई सक्षम हुन र सवल राख्नका लागि प्रत्यक्ष भूमिका खेल्दछ । तर हरेक सम्बन्धलाई निभाउँदा वा जिम्मेवारी उठाउँदा हामी थुप्रै पटक आफूलाई नै उपेक्षा गर्न थाल्छौं । जसका कारण जीवन निरश र दुःखी लाग्न …
Sep 19, 2018	देशभित्र, पत्रपत्रिकाबाट, राजनीति, समाचार, समाज, स्वास्थ्य-सौन्दर्य 0
काठमाडौं ३ असोज । देशकै जेठो वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भएपछि बिरामीको बिचल्ली हुन थालेको छ । एकातिर आकस्मिक कक्षमै स्वास्थ्यकर्मी अभाव छ भने अर्कोतिर अस्पतालकै कमाउ अड्डामा स्वास्थ्यकर्मीको भिडभाड छ । दिनमा ३ सय भन्दा बढी बिरामी वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुग्छन् । आकस्मिक कक्षमा …